Trano eclectic feno famoronana izay tian'ny mpanakanto rehetra | Famoronana an-tserasera
«Trano kely funky ao amin'ny distrikan'i Paseo» avy amin'i Cassi LJ dia nahazo alalana tamin'ny CC BY 2.0
Sofas antitra, latabatra miendrika indostrialy, sary hosodoko maro loko eny amin'ny rindrina, karipetra misy endrika geometrika, zavamaniry manaingo ny zorony ... lamaody noho ny taloha ny fomba eklektika, fa inona no ahitana azy?
Ny eclecticism dia mifototra amin'ny fifangaroan'ny singa amin'ny fomba sy fotoana samihafa, mahita aingam-panahy amin'ny loharano maro samihafa izay mety mifandraika na tsia, amin'ny fomba iray hamoronana valiny haingo tsy manam-paharoa sy am-boalohany, mifanaraka amin'ny toetran'ny olona misambotra azy.
Ny teny hoe eclectic dia avy amin'ny teny grika ary midika hoe 'voafidy', nanomboka mifidy izay tena mahaliana azy ny mpanakanto ao anatin'ny hetsika kanto rehetra. Fomba iray izay hahatsapantsika fahalalahana hampivelatra ny fahaiza-mamorona ary hameno toy izany ny isaky ny tranontsika. Zavatra tsy mitovy endrika, endrika, loko ... tsy manam-petra ny fahafaha-manao.
Zava-dehibe ny fananan'ny eclecticism fandanjalanjana voafaritra, izany hoe ny famoahana be loatra ny hatsarana dia tsy foronina amin'ny fifangaroan'ny singa rehetra.
avy eo andao jerena ny ohatra momba ny trano eclectic tena manokana izay mahomby amin'ny tambajotra. Ao amin'izy ireo tsirairay avy, ny fitambaran'ireo singa samihafa dia mamorona atmosfera izay mamorona ny fahaiza-mamorona amin'ny efitrano rehetra. Izy ireo dia trano tonga lafatra ho an'ny aingam-panahy ara-javakanto, tsy avelany halahelo vetivety isika!
1 Tranon'i Rachael Havenhand
2 Ny tranon'i Tasha avy amin'ny Projet Pocket Projet
3 Tranon'i Kim avy amin'i Kimmes miloko
Tranon'i Rachael Havenhand
Rachael Havenhand dia mpanakanto anglisy izay ny tranony no taratasy firakofany tsara indrindra. Ao aminy no ahitantsika fifaliana na aiza na aiza. Ny loko mavokely sy lilac eo amin'ny rindrina dia misongadina, ny tantaram-pitiavana dia mifangaro tanteraka amin'ny sofa turquoise. Mifanohitra amin'ireo tononkalo fototra ireo, ny mpanakanto dia mampiasa motera geometrika maroloko amin'ny tapis, lamban-databatra ary amin'ny faritra sasany amin'ny rindrina. Miaraka amin'izany, afaka jerentsika ny fisian'ny ondana marobe, izay mitarika antsika amin'ny fomba bohemia izay manjaka amin'ny ankamaroan'ny trano. Eo amin'ny rindrina, feno sary hosodoko ahafahantsika mahita bebe kokoa ny toetran'ny mpanakanto, hitantsika ny motif Meksikana, miresaka momba ny sarimihetsika, fomba mozika ary mpanakanto toa an'i Frida Kahlo. Iza no tsy te honina eto?
Ny tranon'i Tasha avy amin'ny Projet Pocket Projet
Trano iray hafa feno famoronana ihany koa i Tasha. Miavaka noho ny lakozia tany am-boalohany io trano io, izay manambatra ny feon'ny lilac amin'ny rindrina amin'ny turquoise amin'ny fanaka. Ity dia miaraka amin'ny latabatra misy loko marobe misy rakitsoratra vinyl izay manondro ny toerana tokony hipetrahan'ny vahiny tsirairay avy. Misongadina ao ihany koa ireo motera geometrika, satria hitantsika amin'ny sary mainty sy fotsy eo amin'ny rindrina sy eo amin'ny zoro ny fitaovana elektrika. Inona koa, ny tohatra dia tena tany am-boalohany sy toetra. Eto ianao dia afaka mahita ny geometry, mifandanja tanteraka amin'ny ravaky ny trano sisa. Inona no eclectic kokoa noho ity tohatra ity?
Tranon'i Kim avy amin'i Kimmes miloko
Mampiseho amintsika ny tranony mahafinaritra i Kim, mpamorona ny singa mampiavaka azy indrindra dia ny trano fandroana. Hitanay ny taila volom-boasary feno loko, mamorona atmosfera falifaly sy mandray. Ny efitrano fandraisam-bahininy koa dia tena tany am-boalohany, miaraka amin'ny zavamaniry, ondana miloko marobe ary karipetra marindrano, singa izay manaitra ny fomba bohemia. Ny fisian'ny ondana famolavolana mandala dia manondro ny zavakanto hindoa. Ny zoro hafa ao an-trano dia mampiseho antsika rugs antitra. Ny rindrina manga an-dranomasina dia mifanohitra amin'ny sary hosodoko maro loko izay mampiseho ny tontolon'i Kim anaty, izay ahitantsika ny firesahana ireo mpanakanto toa an'i Frida Kahlo indray. Ho fanampin'izany, hitantsika ireo singa voajanahary amin'ny fomba bohemia amin'ny zavamaniry, ary koa amin'ny fanaka vita amin'ny hazo na ao anaty lovia misy voankazo eo afovoan'ny latabatra.
Ireo singa antitra, hippies, bohemian, arabo, Nordic, minimalist ... ireo izay manome aingam-panahy anao indrindra ary mameno anao ny fahavelomana sy ny vibe tsara no hifangaro indrindra amin'ny trano fonenanao. Inona no andrasanao manomboka mamorona azy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Trano eclectic feno famoronana izay tian'ny mpanakanto rehetra hananana
Korontana madiodio no sarintanin'izao tontolo izao "subway"